Rano Munduk, Bali, Indonesia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Riandrano Munduk, Bali, Indonezia
Rano Munduk + Riandranon'i Melanting
Topy maso ny riandrano Munduk sy Melanting
Ny riandrano Munduk dia miorina amin'ny faritra avaratry ny nosy, amin'ny faritra be tendrombohitra, akaikin'ny tanàna iray antsoina koa hoe Munduk. Ity tanàna ity dia misy arabe iray, izay misy lalana tery miampita mankeny an-tsaha, tendrombohitra ary lohasaha. Matetika ny mpizahatany dia misafotofoto amin'ny riandrano 2 - Munduk sy Melanting. Na dia eo akaiky eo aza izy ireo (10 minitra eo ho eo vao mandeha an-tongotra ny iray), dia mbola riandrano samy hafa izy ireo.
Munduk dia miforona amin'ny alàlan'ny rano amin'ny renirano tendrombohitra. Mahagaga ny fisehoany tampoka eo afovoan'ny ala. Afaka mankany amin'ny riandrano ianao amin'ny lalana bitika kely izay mandehandeha any an-tendrombohitra amin'ny alàlan'ny tanàna ary voahodidin'ny ala tropikaly matevina. Tsapa ny fiovaovan'ny toetr'andro isaky ny 300 m.
Ny sisin-dalana eto dia toa fivarotana tsy misy farany mivarotra zava-manitra, voankazo ary vatomamy. Ireo entana ireo dia apetraka mivantana amin'ny tany, amin'ny tsihy. Ny gidro mpangataka indraindray dia mitsambikina avy any an'ala mankamin'ny arabe. Izy ireo dia azo omena sakafo raha irina.
Tsy azon'ny fiara mivantana ny riandrano. Ny fiara fitaterana dia tokony havela ao amin'ny fiantsonan'ny fiara, ary avy eo dia tsy maintsy mandeha 15 minitra eo ianao amin'ny lalana mideza any anaty ala. Làlana maromaro no mankany amin'ny riandrano.
Munduk dia cascade manana haavony 25 m. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo riandrano tsara tarehy indrindra any Bali ary voahodidin'ny vatolampy, izay rakotra zavamaniry matevina toa tile. Ny moss matevina dia hita na aiza na aiza, izay maniry haingana be noho ny hafanana sy ny hamandoana avo.
Ny mpitsidika dia mahazo miditra amin'ny faritanin'ny riandranon'i Munduk amin'ny 8 ka hatramin'ny 20 ora isan'andro. Ny fidirana ho an'ny olon-dehibe dia mitentina 5 000 ropia, ho an'ny zaza 3 000 ropia.
adiresy: Jl. Kayu Putih - Munduk, Munduk, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali 81152, Indonezia
Tapakila fidirana ho an'ny olon-dehibe - 5 000 ropia
Tapakila fidirana ho an'ny ankizy - 3 000 ropia
Sarin'ny riandrano Munduk sy Melanting
riandrano Munduk eo amin'ny sari-tany
Riandrano Munduk amin'ny sarintany